Safarka Vladivostok | Wararka Safarka
Mariela Carril | | Maxaa la arkaa, la fahmay
Vladivostok Waa magaalo Ruush ah oo aad ugu dhow xadka Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi. Waa a magaalada dekedda waxay ku taal meel waxyar 9300 kiilomitir u jirta Moscow waana dekedda ugu muhiimsan Ruushka ee ku taal xeebta Baasifiga. Marka, waa goob muhiim u ah ka ganacsiga badaha.
Markii iigu horreysay ee aan maqlo wax ku saabsan Vladivostok waxay ahayd iskuulka, fasalka Juquraafiga, markii aan ka baranay sheekada quraafaadka ah ee Trans-Siberian Railway. Sabuuradda, borofisarku wuxuu xariiqay xariiq iyo laba magaalo: Moosko iyo Vladivostok iyo kiiloomitir daa'in ah oo isku xira labada. Tan iyo markaas wuxuu i weydiiyay sidee tahay Vladivostok, maxaa lagu samayn karaa, maxay bixisaa ...
2 Dalxiiska Vladivostok
Sidii aan nidhi waa a Magaalada dekedda leh ee Ruushka ee Badweynta Baasifigga, oo aad ugu dhow xadka Waqooyiga Kuuriya iyo Shiinaha. Laga soo bilaabo dhammaadkii 50-meeyadii ilaa dhicitaankii xukunkii Soofiyeeti, magaaladu way ka xirnayd dhammaan ajaanibta tan iyo intii halkan ay ahayd xaruntii ciidammada Soviet Pacific.
Juqraafi ahaan Vladivostok waxaa ku yaal dhul weyne iyo qayb jasiirad ah in ay yihiin gacanka Peter the Great. Qeyb ka mid ah magaalada waxay ku taal jasiiradda Peschany waxaana laga hadlaa wax u eg 56 kun hektar oo ku yaal berriga iyo ku dhowaad 7.500 jasiiradood.
Marwalba kuma jirin gacmaha Ruushka, waxay garaneysay sida loogu jiro gacmaha Shiinaha muddo iyo kahorba gacanta dadka kale ee maxalliga ah. Ruushka wuxuu helay dhulalkan 1858 sanad ka dibna la aasaasay booska ciidamada badda. Wixii intaa ka dambeeyay degitaanku wuxuu bilaabay inuu koro oo koro ilaa 1891-kii dhismaha Trans-siberian Waxay bilaabatay ka dibna meelo fog fog oo ku yaal Ruushka sida magaaladan waxay bilaabeen inay ku xirmaan adduunka.
Tareenka ayaa loogu talagalay inuu isku xiro dekedan muhiimka ah iyo Yurub inteeda kale, isagoo isku xiraya caasimada Ruushka iyo magaalooyin kale oo wadada maraya. Saldhigga xarrago waxaa la dhisay 1912 nasiib wanaagna tan iyo 1991 shisheeyaha ayaa booqan kara. National Gregraphic ayaa yiri waa mid kamid ah 10ka magaalo xeebeed ee ugu muhiimsan maxaa yeelay waxay leedahay buundooyin caan ah, muuqaal qurux badan, jasiirado leh xeebo qurux badan ...
Taas waa inaan ku darnaa nolosha habeenkii ee ay haysato, iskudhafkeeda gastronomy ee cuntada Ruushka, Aasiya iyo Yurub, matxafyadeeda ...
Taariikhdu waxay la socotaa magaaladan, sidaa darteed haddii aad si gaar ah u jeceshahay taariikhda qarnigii XNUMXaad, waad booqan kartaa waana inaad booqataa Matxafka Milatariga iyo Taariikhda ee Badweynta Baasifiga. Waxay diiradda saaraysaa WWII waana mid aad u xiiso badan. Matxaf kale waa Matxafka Gujis-S-56, Taallo xusuus u leh Ruushka oo ku dhacay dhammaan dagaalladii.
Waxa kale oo aad booqan kartaa Matxafka Guriga ee Sukhanovs taasi waxay ka tarjumaysaa sida magaaladii hore u ahayd, alaabteedii, qurxinteedii, daaqad tagtay. Dabcan waxaa jira dhowr madxafyo farshaxan ah. Waxyaabaha kale ee xiisaha leh ayaa ah Primorsky Aquarium, Jasiiradda Russky. Dhismuhu wuxuu leeyahay qaab mowjado xiiso leh wuxuuna albaabadiisa u furay sanadkii 2016 qaabkii Mir-1 iyo haraaga xamaashooyinkii noolaa 450 milyan oo sano ka hor.
Socod aan cidina tabi karin waa fuulitaanka Hill Eagle's Nest Hill, meesha aad qaar ka leedahay Muuqaallo qurux badan oo ku saabsan baysyada iyo magaalada. Waxaad fuulaysaa funicular, kan kaliya ee ku yaal Bariga Fog ee Ruushka, oo ku yaal jiirada Sopka Orlínaya. Waxaa la dhisay sanadkii 1959 iyadoo uu hoos imaanayay xukunka Nikita Khrushchev, labadeeda gaari oo kaliya waxaa laga dhisay Leningrad waxayna shaqadeeda bilaawday sanadkii 1962. Funicular-ka ayaa kugu kaxeynaya buuraha, volcano dabar go'day oo qeyb ka ah silsiladda Sikhote Alin. Aragtida ayaa ugu fiican.
Markaad magaalada ka aragtid meel wanaagsan, waxaad ku sahmin kartaa lug. Sida ugu fiican ayaa ah in la baaro jidadkeeda iyada oo laga bilaabayo Wadada Svetlanska, wadada ugu horeysa ee magaalada. Dhismaheeda quruxda badan waa qeyb ka mid ah taariikhda magaalada, xusuustii horaantii qarnigii labaatanaad, oo maanta loo beddelay hudheelo iyo guryo marti. Waxaa sidoo kale jira Buundada Golden iyo Golden Horn Bay, labadaba soo jiidasho aad u caan ah.
Buundada ayaa ka mid ah shanta buundo ee adduunka ugu dheer. Waxaa la dhammaystiray 2012 wuxuuna ka gudbayaa Golden Horn Bay, oo ku taal bartamaha Vladivostok, wuxuu ku xirayaa magaalada meelaha ugu fog iyo jidka weyn ee federaalka. Buundada Dahabka ah waxay ka bilaabataa dhinaca midig ee gacanka.Ma aha buundada kaliya, wadar ahaan waxaa jira saddex: kan labaad wuxuu ka gudbaa Bosphorus-ka Bariga Jasiiradda Russky halka kan saddexaadna uu ka gudbo Amur Bay.
Dhammaan buundooyinka ku yaal Vladivostok waxaa lagu dhisay seddex sano, Iyada oo loo marayo dhumuc iyo dhuuban, maadaama waxbadan aan waligood lagu dhisin waqti gaaban. Midkoodna buundo lagama dhisin marin biyoodka Ruushka, ama buundo ay taageerayaan fiilooyin si loo daboolo masaafo aad u badan. Sidaa darteed, talobixinta Shiinaha, Faransiiska iyo Jabbaan khibrad badan ayaa loo raadsaday. Ugu dambeyntii, buundooyinka waxaa loogu talagalay Saint Petersburg waxayna arkeen iftiinka.
Maanta seddexdan buundo waa guul injineernimo qofkasta oo taga Vladivostok wuu dhaafa. Khibrada ka soo gudubka Buundada Russky xilliga qaboobaha, oo wata dabaylo xoog leh, waa mid cajiib ah… haddii aadan la baxayn baabuur iyo dhammaanba! Baabuur la'aan waad ka gudbi kartaa Buundada Zolotoy lug, maalin deggan.
Dhinaca kale waa Tokarevskaya Koshka laydh, Meel safarro badan. Waa 150 sano jir tilmaamaysa maraakiibta soo galaya dekedda. Had iyo jeer waxaa jira dalxiisayaal sawir qaada. Sidoo kale waa inaad booqataa Qalcadda Vladivostok, dhisme adag oo kakooban ayaa maanta isu rogay matxaf. Ama kaniisadaha masiixiga ee ay mudaharaadyadu dhiseen mudda ka dib.
Kooxahan diimeed kaliya maahan kuwa magaalada jooga oo leh taariikh taariikhi ah, waxaa jira reer Yukreeniyaan, Moldovans, Poles, Finns ... laakiin dhismaha macbudyo had iyo jeer waxay u baahan yihiin lacag seddexdan kooxood ee waaweynna waa kuwa iyagu lahaa faa'iidooyin. Qaar Kaniisadaha Vladivostok way burbureen kuwa kalena waxay ku guuleysteen inay ka badbaadaan xilligii hantiwadaagga, mararka qaarkood uma shaqeeyaan sidii macbudyo. Waxaa jira wadar ahaan 40 kaniisado madhab ah, laakiin tan ugu weyn uguna sharafta badan waa Kaniisadda Isgoyska Hooyada Ilaahey, oo dib u soo celinteeda dhacday ka dib dhicitaankii Midowgii Soofiyeeti.
Taawarkeeda dawan ayaa leh 10 gambaleel, culeyska ugu culusna wuxuu gaarayaa 1300 kiilo. Macbudkan wuxuu awood u leeyahay kun qof wuxuuna isku dayaa inuu u ekaado sida ugu macquulsan nuuciisa asalka ah, kan leh shan domes. Iskutallaabta, waxay leedahay dherer dhan 40 mitir. Kaniisad kale oo la ogaado waa Kaniisada Katooliga ee Hooyo Quduuska ah ee Ilaah, oo ka tirsan bulshada reer Poland iyo Kaniisadda Lutheran ee St. Paul.
Iyadoo aan loo eegin xaqiiqda ah inaad ku tamashleyn kartid magaalada lugo waxaan sidoo kale isticmaali karnaa kanaga iskuxirka gaadiidka maxaa ka mid ah trolleybuses, taraamyada iyo basaska. Metro-ku wuxuu leeyahay toddobo saldhig oo keliya. Iyo hadaad rabto inaad ogaato jasiiradaha ku xeeran waxaa jira doomaha iyo doomaha. Marka waxaad aadi kartaa Jasiiradda Russky, Jasiiradda Ruushka, oo kun mitir oo laba jibbaaran, oo ku habboon socodka iyo dalxiisyada.
Waxaad u tagi kartaa Vladivostok dalka Japan ama waxaad dib ugu laaban kartaa Vladivostok oo ka timi Moscow. Haddii aad doon ku tagtid oo aad joogtid wax ka yar 72 saacadood, uma baahnid fiiso. Haddii aad go'aansato tareenka, waad awoodaa Qaado Trans-Siberian-ka Moscow markay tahay 13:20 oo waxaad tagtaa Vladivostok 4:25 adeegga degdegga ah. Nooca ugu raqiisan wuxuu yimaadaa ku dhowaad 19: XNUMX pm maalinta xigta ee ka tagta caasimada Ruushka. Tareenka wuxuu istaagayaa Ilan Ude, Irkutsk, Krasnoyarsk, Novosibirsk, Omsk, Yekaterinburg iyo Nizhny Novgorod.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Safarka Aasiya » la fahmay » Safarka Vladivostok
6-da huteel ee ugu wanaagsan Kobanheegan
Fuciño do Porco oo ku taal Galicia